Uncedo Ngeengxaki zeCrastal Growing Problems
Uncedo lweengxaki ngee-Cryar Crystals
Iikristali ze-Sugar okanye i-rocky candy ziphakathi kwamakhristal ekhuselekileyo ukukhula (ungadla!), Kodwa akusoloko ikhefu elula ukukhula. Ukuba uhlala kwindawo epholileyo okanye efudumalayo, unokufuna isiluleko esincinci sokufumana izinto.
Kukho iindlela ezimbini zokukhuphula iikristali zeshukela. Into eqhelekileyo ibandakanya ukwenza isisombululo seshukela esipheleleyo , ukuxhoma umtya onzima kumanzi, kwaye ulinde ukukhulelwa kwamanzi ukugxila kwisisombululo kwindawo apho iikristali ziqala ukuyilo ngomtya.
Isisombululo esipheleleyo singenziwa ngokufaka ushukela kumanzi ashisayo de kube iqala ukuqokelela kwinqanaba besebenzisa i-liquid (kungekhona iswekile ngasezantsi) njengesisombululo sakho sokwanda kwekristal. Le ndlela ithambe ukuvelisa iikristali ngaphezu kweveki okanye ezimbini. Ihluleka ukuba uhlala kwindawo ethile apho umoya ugocekile kangangokuthi ukukhuphuka kuncipha kakhulu okanye ukuba ubeka isikhephe kwindawo apho izinga lokushisa litshintsha (njengefestile yelanga) ukuze iswekile ihlale isisombululo.
Ukuba unenxaki ngeendlela ezilula, yiloo nto okumele uyenze.
Khulisa i crystal imbewu .
Enye indlela yokufumana i-crystal yembewu ukuphula enye i-candy yamatye okanye enye i-crystal yelanga. Sebenzisa i-knot elula ukubopha i-crystal yembewu kwinqanaba elithile le-yiloni (ungasebenzisi ngentambo eluhlaza xa unayo i-crystal yembewu ). Xa ugxotha i-crystal kwisisombululo ofuna ukuba ihlanganiswe ngokupheleleyo, kodwa ungathinti macala okanye ngaphantsi kwesitya.
Supersaturate isisombululo sakho sekristal.
Ufuna ushukela oluninzi njengoko unako ukuphelisa kwisisombululo. Ukwandisa izinga lokushisa ngokukhawuleza kwandisa inani leswekile eliya kutshabalalisa, ngoko unokufumana ushukela oluninzi kumanzi abilayo kunomtshini wamanzi othethiweyo, umzekelo. Ubilise amanzi kwaye ugxobhoze kwiswekile ngaphezulu kunokusuntshisa. Ingcamango enhle ukuthulula isisombululo ngefowuni yefowuni ukuqinisekisa ukuba ushukela olungapheliyo uhlala kwisisombululo sokwanda kwe-crystal. Ungayisebenzisa esi sixazululo-okanye unako ukuyivumela ukuba ikhuphuke usuku okanye njalo de uze ubone ama-crystals aqala ukwenza kwifom. Ukuba ukhetha ukukhuphuka kwenye indawo yamanzi, uyenze kwakhona kwaye uyicwecwe ngaphambi kokuba uqalise i-crystal yembewu.
Yandisa isisombululo ngokukhawuleza.
I-Sugar iyancitshiswa kangako njengoko iqondo lokushisa liwela ekubileni ukuya kwiqondo lokushisa okanye izinga lokushisa. Ungasebenzisa le mpawu ukukhuthaza ukukhula kristal ngokukhawuleza. 'Iqhinga' kukuvumela ukuba isisombululo sipholisise ngokukhawuleza kuba ukuba isisombululo seshukela siphuthuma ngokukhawuleza sithatha i-supersaturated. Oku kuthetha ukuba izisombululo ezipholile ngokukhawuleza ziya kugxila kakhulu kunokuba zikhule iikristali. Unganciphisa ukupholisa kwesisombululo sakho ngokubeka isiqulatho sonke sekristal ngaphakathi kwebhodlela lamanzi afudumele. Yibonakalise isitya sokukhusela isikristali ukuze kungangeni kwamanzi okanye uqinisekise ukuba amacala omgca we-crystal aphakamileyo ngokwaneleyo ukuba amanzi angayi kungena ngaphakathi. Vumela ukusetywa konke kuhla kancane kwinqanaba lokushisa. Iikristali ze-Sugar zikhula ngokukhawuleza ngoko gama ubona ukukhula ngaphakathi kweeyure ezimbalwa, kunokuthatha iintsuku ezimbalwa ukuba zibonwe. Emva kokuba isisombululo siye sancipha ngokukhawuleza kwiqondo lokushisa, usenokuqhubeka uhlawula kwiqondo lokushisa lefriji (ukuba i-container iya kufakwa ngaphakathi).
Ukuba unqanyanyisa i-crystal yembewu kwisisombululo esanele ngokugcwele , unokufumana ukukhula kristall ngaphezu kweeyure ezimbalwa ngokulawula ukupholisa isisombululo.
Ngoko ke, nokuba uhlala kwindawo ethile apho ungasebenzisa indlela yokukhuphuka kwamanzi ekwandisa i-crystals, ungafuna ukunika le ndlela.
I-Template yoLondolozo lweBhodi yeProjekthi yeZebheno
I-Baking Soda neVinegar Chemical Volcano
Umxholo we-Greek Greek Poseidon
Imiyalelo yeeMilwimi ezininzi kunye neBPM
Ngaba Badla Abantwana eChina?
Indlela yokwenza i-Humidor entsha
Ten Sicily Facts
Kutheni iRastas Smoke Ganja kunye ne-Wear Dreadlocks?